'अमेरिकन इगल' भन्दै वकिल कुट्ने र कालो कोट च्यातिदिनेसम्मको धम्की ! Nepalpatra 'अमेरिकन इगल' भन्दै वकिल कुट्ने र कालो कोट च्यातिदिनेसम्मको धम्की !
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुलाई कुट्ने र कालो कोट च्यातिदिनेसम्मको धम्की आएको छ ।
चार जनाको समूहमा आएका युवाले नेपाल बार एसोशिएसन परिसरमा प्रवेश गरेर आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई कुटपिटको धम्की दिएका थिए । एक-एक वकिलहरूलाई ठोक्छु र कोट च्यात्छु भन्दा आक्रोशित भएका एक अपरिचति व्यक्तिले आफू अमेरिकन इगल भएको बताएका थिए ।
अपरिचत बिना सरोकारका व्यक्तिहरु बारमा प्रवेश गरेर अचानक कानुन व्यवसायीहरूमाथि तथानाम गालीगलौज गरेका थिए । ती व्यक्तिहरुले गालीगलौज र धम्क्याउन थालेपछि आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरुले त्यसरी गालीगलौजमा संलग्न एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए ।
कानुन व्यवसायीलाई धम्की दिँदासमेत प्रहरी मुकदर्शक बनेको भन्दै बार परिसरमा रहेका वकिलहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सोही क्रममा केहीबेर बार परिसर तनावग्रस्त भएपनि प्रहरीले उनीहरुलाई त्यहाँवाट हटाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट राखेपछि बारले बोलायो आकस्‍मिक बैठक
प्रधानन्यायाधीशले बोलाए फुलकोर्ट, असन्तुष्ट १८ न्यायाधीश पनि सहभागी हुने
#कालो कोट च्यातिदिने